“သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသမ္မတရဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ အလည်အပါတ်ခရီးက နှောင်ဖွဲ့မှုများကို တောင့်တင်းခိုင်မာစေခြင်း” | ESD | Burmese
“သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသမ္မတရဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ အလည်အပါတ်ခရီးက နှောင်ဖွဲ့မှုများကို တောင့်တင်းခိုင်မာစေခြင်း”
December 2, 2019 Abhishek Commentry
သောတရှင်များခင်ဗျား၊ ဒီကနေ့သတင်းဝေဖန်ချက်အခန်းကဏ္ဍမှာ နိုင်ငံရေးဆန်းစစ်သူ ဆောင်းပါးရှင် M.K. Tikku ဝေဖန်ရေးသားပေးပို့ထားတဲ့ “သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသမ္မတရဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ အလည်အပါတ်ခရီးက နှောင်ဖွဲ့မှုများကို တောင့်တင်းခိုင်မာစေခြင်း” အကြောင်းသတင်းဆောင်းပါးကို ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမဲ့အတိုင်း အစီအရင်ခံ တင်ပြပါရစေ။
အသစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ သီရိလင်္ကာသမ္မတ သို့မဟုတ် ဝန်ကြီးချုပ်တဦးဟာ သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသော နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်အဖြစ် အိန္ဒိယနိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်ဒါက အသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အတိတ်ကလည်း အဲဒီလိုခရီးစဉ်တွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း Mr Gotabaya Rajapaksa ဟာ သူ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးသော နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်အဖြစ် New Delhi မြို့ကို ရောက်ရှိလာတဲ့အခါ အရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံနဲ့ သူ့ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေအကြား ဆက်ဆံရေးတွေရဲ့ အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တဲ့ ရှေးရိုးအစဉ်အလာရဲ့ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် နှစ်ဖက်စလုံးတို့မှာ လက်ရှိအမှန်တရားတွေနဲ့ ယုတ္တိကျတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့အညီ တည်ရှိနေတဲ့အယူအဆ အတွေးအခေါ်တွေကို ချမှတ်ဘို့ လိုအပ်လာခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Dr. S. Jaishankar ဟာ ပထမဦးဆုံးသော သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကို သွားရောက်ပြီး သမ္မတသစ်အား သူ့ကိုသမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်း သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ New Delhi အစိုးရရဲ့ ဆုမွန်ကောင်းတွေကို ပို့သခဲ့တဲ့အပြင် အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာ ဝန်ကြီးချုပ်ထံမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ တရားဝင်လာရောက်လည်ပါတ်ဘို့ ဖိတ်ကြားလွှာကိုလည်း သယ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ပြန်လည်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ သီရိလင်္ကာသမ္မတကလည်း သူ့ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ အလည်အပါတ်ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ Mr Modi အား သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပါတ်ဘို့ ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီခရီးစဉ်ရဲ့ အသေးစိတ်ကို များမကြာမှီရေးဆွဲချမှတ်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ဖက်စလုံးတို့မှာ အရေးပါပုံရဲ့ ခံစားချက်ဟာ နှစ်နိုင်ငံအကြားဆက်ဆံမှုတွေကို အသေအချာဖြစ်စေပြီး၊ အတိတ်ကာလက ခံယူချက်တွေရဲ့ အကျဉ်းသားတွေမဖြစ်စေအောင် ထိန်းသိမ်းဘို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအယူအဆတွေက အထူးသဖြင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဟာ LTTE တို့နဲ့ စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေချိန်မှာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခံစားချက်မျိုးဟာ Mr Mahinda Rajapaksa က သမ္မတဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ Mr Gotabaya Rajapaksa က ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်နေခဲ့တုံးက ပေါက်ပွားခဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ ဒီစစ်ပွဲမှာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံကို အပြည့်အဝထောက်ခံခဲ့ပြီး တချိန်တည်းမှာဘဲ Tamil လူမျိုးတွေကို တရားမျှတစွာ ဆက်ဆံဘို့ Colombo အစိုးရအား အဆက်မပြတ်တိုက်တွန်းနေခဲ့ပါတယ်။
မလွှမြရှောင်သာဘဲ Tamil လူမျိုးတွေရဲ့ အရေးကိစ္စဟာ New Delhi မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ ဒီအရေးကိစ္စဟာ သီရိလင်္ကာအစိုးရအဘို့ Tamil Tigers တွေအပေါ် အောင်မြင်သောစစ်ပွဲကို ဆင်နွှဲပြီးတဲ့နောက် မဖြေရှင်းရသေးတဲ့ အကြောင်းကိစ္စတခုဖြစ်ပါတယ်။ အတိတ်က ဂတိပြုချက်တွေရှိခဲ့ပေမဲ့ Tamil လူမျိုးပြဿနာကို ဆက်လက်ပြီး လျစ်လျူထားကြပါတယ်။ သမ္မတ Mr Rajapaksa ဟာ Sinhaler လူမျိုးတွေအများစုရဲ့ မဲဆန္ဒကြောင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတဟာ လူနည်းစုတမီးလ်လူမျိုးတွေနဲ့ မူစလင်တွေအပါအဝင် အားလုံးတို့အတွက် တရားမျှတစွာဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာကြသူတွေက ဒီအချက်ကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့လက္ခဏာအဖြစ် ယူဆကြပါတယ်။
အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်း အမေရိကန်ဒေါ်လာပေါင်း သန်း (၄၅၀) ရှိတဲ့ ပရိုဂျက်ငွေအတွက် အထောက်အပံ့ပြုဘို့ ခံယူထားပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးခံယူချက်တွေက သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ တရုတ်နိုင်ငံနဲ့စာလျင် မပြောပလောက်အောင် ဖြစ်ပေမဲ့ နယူးဒေလီအစိုးရမှာ အခြေခံလိုအပ်ချက် အဆောက်အအုံမှာ အမှန်တကယ်အကောင်အထည်ဖေါ်တဲ့ မှတ်တမ်းတွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ ကြီးမားတဲ့ပရိုဂျက်တွေနဲ့ အဆက်မပြတ် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေက ဒီကျွန်းနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအတွက် အကောင်းဆုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ သိမြင်နားလည်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ The Hambantota ဆိပ်ကမ်းပရိုဂျက် သို့မဟုတ် Matale နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တွေဟာ ကြီးမားတဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနဲ့ ဒီပရိုဂျက်တွေထဲက အောင်မြင်မှုအပေါ် မျှော်လင့်ချက်တွေအကြား လုံးဝမကိုင်ညီတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ဥပမာတွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်မှန်တဲ့စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုအပေါ် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေကို အာရုံပြုလာကြတဲ့အခါ၊ ဒီအခြေအနေဟာ အင်ဒို-သီရိလင်္ကာ အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးအတွက် အနိုင်-အနိုင် အခြေအနေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတ Mr Rajapaksa ဟာ “ကျွန်ုပ်ရဲ့ သမ္မတရာထူးသက်တမ်းမှာ အိန္ဒိယနဲ့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့အကြား ဆက်ဆံရေးကို အလွန်မြင့်မားတဲ့အဆင့်ဆီသို့ သယ်ဆောင်လာလိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့မှာ သမိုင်းစဉ်အရရော နိုင်ငံရေးအရပါ အလွန်ရှည်လျားတဲ့ ဆက်ဆံမှုသက်တမ်းတွေရှိနေပါတယ်” လို့ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ သီရိလင်္ကာသမ္မတသစ်က Colombo နဲ့ New Delhi အကြား ဆက်ဆံရေးတွေမှာ လန်းဆန်းတဲ့ ချဉ်းကပ်မှုကို အချက်ပြလိုက်ဒါဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတဟာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို စတင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် စသည်ဖြင့် ဆောင်းပါးရှင် M.K. Tikku ဝေဖန်ရေးသားထားတာကို နိဂုံးချုပ် အစီအရင်ခံ တင်ပြလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျား။
ပါလီမန်လွှတ်တော်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံရပ်ခြား ငွေကြေးလှူဒါန်းမှု (ထိန်းချုပ်ရေး) ပြင်ဆင်ချက် ဥပဒေကို အတည်ပြုလိုက်ကြသည်။
အိန္ဒိယရေတပ်မတော်၏ ရဟတ်ယာဉ်တပ်ဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီး အရာရှိများ ပါဝင်သွားပြီဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု မြင့်မားနေသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲများ ရွှေ့ဆိုင်းသွားမည်မဟုတ်ပေ။